Ogaden News Agency (ONA) – Booliska & Shacabka Catalonia oo Gacanta Isula Tagay.
Booliska & Shacabka Catalonia oo Gacanta Isula Tagay.
Posted by ONA Admin	/ October 1, 2017
Waxaa maanta oo Axad ah Ismaamulka Catalonia ee waqooyiga dalkaasi Spain ka bilowday afti ay doonayaan dadka dhulkaasi ku dhaqan inay ka go’aan dalka Spain.
Aftidan oo uu soo qaban qaabiyey maamulka gobalkaasi ayaa waxaa horey u joojiyey Maxkamada Sare ee dalka Spain oo sheegtay in aftidaasi sharci daro tahay oo aan la qaban karin. Dowlada dhexe ee Spain ayaa amar ku bixisay booliiska inay tilaabo ka qaadaan goobaha loo diyaariyey inay shacabka gobalkaasi codkooda ka dhiibtaan.
Boqolaal xarumaha loogu talo galay codbixinta inay ka dhacdo oo ay ku jiraan Iskuulada kuyaal gobalkaasi Catalonia oo ay ku jirto magaalada Barcelona ayey booliiska la wareegeen kadib markii goobahaasi la geeyey sanaadiikhda codbixinta Aftidan gooni-u-goosadka ah.
Saaka ayey qaar kamid ah shacabka gobalkaasi Catalonia iyo booliiska gacanta isula tageen kadib markii booliiska ay bilaabeen inay awood u adeegsadaan dadka usoo banaanbaxay inay codkooda dhiibtaan. Inkastoo booliiska sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan xarumaha iyo sanaadiikhda codbixinta, hadana waxaa jira goobo weli furan oo ay dadweynaha gobalkaasi safaf ugu jiraan inay codkooda ka dhiibtaan.